ဆီလူး မမှားမိစေနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ဆီလူး မမှားမိစေနဲ့	10
Posted by ဂျစ်စူ on Dec 19, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Think Different | 10 comments
အမတ်တွေ ပင်စင် လခ ပေးမဲ့အစား
မီးမရှိတဲ့ရွာတွေ ဆေးရုံတွေ ကို တစ်လတစ်ခါလောက်စီပဲ ဖြစ်ဖြစ်
မီးချောင်းတစ်ချောင်း ဖြစ်ဖြစ် ၊
ဓာတ်တိုင် ဓာတ်ကြိုးတစ်ချောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ
ဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ ပေါက်ပြဲနေတဲ့ ကားလမ်း တစ်ပေါက်
ဖာထေးပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ တစ်ကဲ့ လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေ နေရာတွေမှာ အစားထိုးသုံးလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ
အမတ်တွေလဲ နိုင်ငံအကျိုးတွက် အမတ်လုပ်ကြတာ
ပင်စင်လဲ မတ်ကြမယ် မထင်ပါဘူး
အမတ်ထွက်ရင်လဲ ကိုယ့်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ ရှာမစားနိုင်တဲ့လူတွေလဲ မပါလောက်ပါဘူး
ဂယ်ကြီး ပင်စင်တော့ မပေးလောက်ဘူးထင်တာပဲ
ဘောလုံး နှစ်ပွဲ ကြေးတူတူဖွင့်ထားရင်
အသင်းကြီး လူသာပြီး အမှတ်လိုတဲ့ ပွဲက အသင်းကို ရွေး လောင်းရသလိုပေါ့
အဲသလိုပဲ… လူဂျီးမင်းတို့လဲ နိုင်ငံ့ပိုက်ဆံတွေကို
ဗိုးဗိုးမြောက်ပြောတဲ့ နှိုင်းရသဘောတရားလေး နားလည်ကြပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်
ဒါဆို များတို့ရွာသားတွေကိုလဲ ပင်စင်ပေး..အဲလေ
ပင်စင်လခ တစ်လ တစ်တိန်းပေး..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပေးသင့်ပါတယ်။
နောက်နောင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဘယ်လိုရွေးကောက်ပွဲမျိုးမှ
ယုတ်ဆွ အဆုံးးးး ၁၀ အိမ်ခေါင်းမှူးအတွက်ရွေးချယ်တာမျိုးမှာတောင် ဝင်မပါတော့ပါဘူးး
ဒီ အခွက်တွေ မမြင်ရစေပါဘူး စာချုပ်ချုပ်ရင် ပေးရတာ တန်ပါတယ်။
ဘယ်နဲ့ ဘယ်လို အရှက်မရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ရေစက်မကုန်နိုင်သေးတဲ့ တိုင်းပြည်လည်း မသိ။
E.မြောက်မြောက် says: ဟွန့်အွန်း ဟွန့်အွန်း ဗြားမှပေးနဲ့
kai says: ဟိုးးးရှေးရှေးကမ္ဘာစစ်ကာလက… သဲကန္တာရဖြတ်… ကုန်တွေသယ်ရတဲ့.. လား လို့ခေါ်တဲ့..၀န်တင်တိရိဆ္တန်တွေရှိတယ်တဲ့ကွယ်..။
အဲဒီအကောင်တွေ.. ခြေဒဏ်ရာရရင်ဖြစ်ဖြစ်.. နေမကောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်.. အပိုဝန်မထားနိုင်သမို့.. ရင်နာနာနဲ့သတ်ပစ်ရသတဲ့..။
လားပင်စင်ပေးရင်ကော… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
E.မြောက်မြောက် says: ဟွန့်အွန်း ဟွန့်အွန်း
အဲဒါ ခုဏက တရဲလာခြောက်တဲ့
အောင်ကြုနဲ့ ငခြောက်ကိုပဲ ပေးလိုက်
ဇီဇီခင်ဇော် says: စကား အတင်းစပ်
ဘောလီဝုဒ်က Oh my God (OMG) ကား က ၂ ကား ရှိတာ။
ခု ထိုင်ကြည့်နေရင်း တဂျီးကိုပဲ ပြေးပြေးမြင်နေတာ မခက်ဘူးလား
Mike says: .လားပင်စင်ပေးရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့သဂျီးရယ်
Mike says: Ye Min
ကျုပ်တို့လို နေပူမရှောင် မိုးရွာမကြောက်နဲ့
စစ်သက်၅ နှစ်လောက်နဲ့ ပင်စင်ပေးဖို့
မပြောခဲ့ကြတာ့့့ ၊
နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာက သိန်း ၁၀၀ လောက်လိုချင်
တပ်ထဲမှာ အနှစ် ၄၀ လောက်အမှုထမ်းပြီး
နိုင်ငံရေးပင်စင်ပေးမဲ့အစာ့း့့ု
ဟား ဟား ဟား ဟား ဟာ်း
Credit Zawwin Hlaing Via Le Le Tun
kai says: ယူအက်စ်တပ်တွေလည်း.. ကန်ထရိုက်နဲ့လုပ်ကြတာမို့.. စစ်ပြန်ဆို.. ဒုက္ခရောက်ရော…။
ရဲထဲ.. လုံခြုံရေးအလုပ်တွေထဲ ၀င်လုပ်ကြရတာများတယ်.။
မြန်မာပြည်လည်း.. တချိန်ဆို.. အဲလိုဖြစ်လိမ့်မယ်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
alinsett says: အဲ့ ပင်စင်ကိစ္စကြီး ကြားရတာ…အတော် စိတ်ပျက်မိ…..
ဟိုတခါ… လစာ ဆယ်သိန်းပေးဖို့ တောင်းကတည်းက…ကြည့်ကြည့်ပြီး..စိတ်ပျက်လာတာ….
အူးစည် says: အူးမျောက်က အနောက် သန် တယ်နော်.. :D